GOORTA LA BEERO GEEDO YAANYO LOOGU TALAGALAY LAGU KORIYO, SIDA LOO KORO YAANYADA - BEER CAGAARAN
Geedo yaanyo loogu talagalay aqalka dhirta lagu koriyo: goorta la beero iyo sida loo koro
In dabiiciga ah, yaanyada waxay midho u bixiyaan oo keliya waqti gaaban, iyo ka soo geli wakhti dhan sanadka oo dhan - Tamaandho ayaa u baahan in la koro ee lagu koriyo.
Laakiin si ay beergooyska artificial si aad u badan, iyo midhaha qudhoodu - dhadhan fiican leh iyo casiir leh, waxaad u baahan tahay inaad si habboon u diyaariso geedo.
Halkee laga heli karaa geedo for yaanyada?
Haddii aad haysato waqti geedo yaanyo ah ayaa si madax banaan loo kori karaa - laga bilaabo miraha.
Haddii iibiyayaashu ka iibsan karaan geedo of noocyada ugu caansan, ka dibna madaxbannaan waxaad xitaa kori kartaa noocyo qotodheer. Waxa ugu muhiimsan waa in si habboon loo ilaaliyo farsamada.
Bannaanka u badan Talada ku wareeji abuurka ka hor inta biqilka si degdeg ah iyo fududeeyaa habka.
Hase yeeshe, sida ku dhaqanka, dhirta ugu adkaysta iyo midhaha leh - kuwaas oo koray abuurka qalalan. Waxay ku yar yihiin awoodaha shuruudaha koritaanka.
Ciidda geedo waa inay noqdaan dabacsanaan iyo mar walba hodan ku ah nafaqooyinka. Fikrad ahaan isticmaal carrada ku yaal aqalka dhirta lagu koriyo - markaa beerashada dhirta ayaa sahlanaan doonta inay la qabsato xaaladaha isbeddelka.
Isku duub sprouts ee yaanyada 2-3 maalmood suurtagal maahan. Waa lagama maarmaan in la qaato dharka suufka, uumi biyo, u dhig miiska si uu u jiro fogaan yar oo u dhexeeya. Ku dabool maro qoyan, ku rid weel xiran. U hubso in hawadu dhowr jeer maalintii.
Abuuro abuur oo cufan ah oo dhulka ku yaal, fogaanta. Ama isla markiiba geedo mustaqbalka ah ee koobabka gooni ah, gooyaa abuurka dhulka ilaa qiyaas ahaan nus mitir.
Haddii aanay jirin waqti iyo shuruudaha abuurka, waxaad iibsan kartaa geedo diyaarsan for yaanyada. Laakiin si ay dhirta si aad u hesho xididka iyo miro wanaagsan, waxaad u baahan tahay inaad doorato geedo.
Waa maxay geedo lagu iibsado maaha wax qiimo leh:
geedo leh ugxan iyo miraha yaryar: halka dhirta ay xididada ku qaadan doonto, miraha si dhab ah uguma korin, iyo baadiyaha lafteedu daciifinaysaa mana u egtahay in la siiyo dalag goosasho leh;
aad u qaro weyn, caleemo waaweyn - doorashadani waa mid soo jiidasho leh. Laakiin xaqiiqda ah, geedo noocan oo kale ah ayaa si aad ah loo bacrimiyey leh nitrogen - si ay u koraan dhaqso. Maaha mid u qalma iibsashada - koritaanka oo dhan wuxuu tagayaa caleemaha, iyo midhaha, haddii ay jiraan, aad u yar;
yellowed caleemaha hoose ee baadiyaha. Qalabka iibiyuhu wuxuu ku qancin doonaa in tani ay sabab u tahay gaadiidka iyo la'aanta qoyaan, laakiin waa in aanad ku qancin inaad iibsato dhirta kala jaban ee rajada ah inay ku soo baxaan nolosha;
sidoo kale ma aha mid ku haboon iibsashada geedo, kaas oo si dhow - baadiyaha ah baadiyaha - lagu beeray weel: Marka transplanting waxaa jira ujeeda sare ee dhaawaca xididada, waxay qaadan doontaa ugu yaraan hal wiig si aad u bogsato - inta lagu jiro waqtigan waxaa suurtogal ah in lumiyo qeyb ka mid ah dalagga.
Maxaa geedo ah waad iibsan kartaa:
dhumucda asliga ah waxay ku saabsan tahay qalin;
caleemaha waa cusub, oo dhan. Sami baxo - 8-10 gogo ';
joogitaanka burushka ubaxa.
Goorta ay bilaabi karaan yaanyada beerto si loo koriyo?
Goorta la beero geedo yaanyo loogu talagalay aqalka dhirta lagu koriyo? Waqtiga beerashada geedo yaryar oo loogu talagalay dhirta lagu koriyo waxay ku xirnaan doontaa haddii ay jirto kuleylka iyo in kale.
Geedo geedo loogu talagalay yaanyada waxay qaadataa laba bilood. Qiyaastii 52-60 maalmood ayaa loo baahan yahay geedo noocyo kala duwan ah si ay u noqdaan kuwo ku filan si xoog leh loogu beerayo dhulka. Noocyo dhaadheer waxay qaadan doontaa 5-7 maalmood oo dheeraad ah.
Si fiican aqalka dhirta lagu koriyo geedo waxaa la beeran karaa sanadka oo dhan - taas oo gudaha ah heerkulka hawada kama hoos dhigi doono 15 darajo.
In lagu koriyo kululeyn Geedo yaryar ayaa la beeray karaa aan ka hor bilowga May - celcelis ahaan 5-7 tirooyin.
Waxaan ogaanay markii ay beeri (beero) yaanyada (yaanyada) on geedo for lagu koriyo, hadda waxaan ku ogaan doonaa sida loo koro geedo yaanyo. Maxay tahay in lagu koriyo geedo yaryar oo yaanyo (yaanyada)? Wixii dhirta ee aqalka dhirta lagu koriyo waxaad u baahan tahay inaad abuurto oo aad dhowrto xaalado gaar ah oo ku dhow dabiiciga. Tani waxay khuseysaa labada duur ee waaweyn iyo geedo.
Galabtii, dhirku wuxuu u baahan doonaa iftiin dheeraad ah oo kululeeyo hawada, habeenkii - madow iyo hoos u dhig heerkulka 5-8 digrii. Fikrad - 20-25 digrii galabtii iyo 16-18 mugdiga. Haddii aadan isbeddelin heerkulka iftiinka iyo heerkulka - dhirta ayaa si korniin ah u kori doona oo aan fiicnayn miraha.
20ka maalmood ee ugu horreeya ee ay duurka u koraan si aad u qoto dheer. Waqtigaan si gaar ah heerka iftiinka waa muhiim: haddii iftiinku uu hooseeyo, dhirta ayaa la soo tuuri doonaa, ciidamaduna waxay geli doonaan koritaanka caleemaha iyo caleemaha.
Geedo yaryar ayaa u baahan in si joogto ah loo waraabiyo - Warshadani waa mid aad u jecel qoyaanka. Wixii geedo biyo fiican oo la kariyeymaxaa yeelay Buundooyinka weli way daciif yihiin waxayna u adkeysanayaan cudurrada. Heerkulka biyaha wuxuu kudhowaad yahay 20 darajo.. Iyo mid kale oo muhiim ah: biyaha marka biyaha lagu waraabiyo ha ku dhicin caleemahasi aanay u bilaabin in laysku duro oo uu sii xumaado.
Laakiin qoyaanka sare ee lagu koriyo waa in laga fogaadaa: waxay u horseedi kartaa cudur ay duurka. Inta badan ku habboon heerka qoyaanka hawada - 60-70%.
Marxaladda muhiimka ah ee geedo sii kordhaya - quudinta. Dharka ugu horeeya waa in la sameeyaa marka caleen ugu horeysa ay soo baxdo. Si aad u hesho goosashada sida ugu dhaqsaha badan, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho quudinta foliar.
Marxaladaha hore, waxaa lagugula talinayaa inaad isticmaasho daawada monophosphate potassium. qiyaasta aan ka badnayn 1 tbsp. baaldi 10 litir oo biyo ah. Iyo halkan Bacriminta-yar oo ka kooban bacrimiyeyaasha ayaa ugu fiican in aan la isticmaalin: ka dib iyaga oo dhan korniinka waa on caleemaha, iyo midhaha yihiin yar yar iyo inta badan dhadhan.
Quudinta si fiican ayaa loo sameeyaa fiidkii - sidaa darteed dhirta ayaa heli doona dhammaan nafaqooyinka si fiican. Waxaad isticmaali kartaa walxaha noocan oo kale ah sida Akvarin, potassium iyo kalsiyal kalsiyum, HOL.
Sidee loo hubiyaa diyaargarowga geedo loogu guuriyo?
Haddii geedo transplanted goor hore - dhirta laga yaabaa in aan degeynin, ama waxay qaadan doontaa wakhti dheeraad ah si ay ula qabsadaan.
Qalitaan goor dambe ah sidoo kale ma horseeddo wax wanaagsan: marka ugxan-soo-baxu u muuqdo, waxaa fiican in aan waxyeello geedka, sidaa darteed miraha bilaabaya in uusan dhicin.
Go'aanso diyaargarowga geedo loogu talagalay ku-tallaalidda waxay noqon kartaa saddex sababood:
Heerka baadiyaha ayaa yareeyay yaanyada. 15 cm, dheer - qiyaastii. 30 cm;
Bush wuxuu leeyahay 12 caleemo oo buuxa. Caleemaha waa cagaar, oo aan lahayn dhibco iyo meelaha la qalajiyey;
waxaa jira 1-2 inflorescences, laakiin weli weligii ugxan lahayn.
Geedo transplanted yaanyada, soo raaci by sii kordhaya in lagu koriyo ah. Haddii aad raacdo dhammaan xeerarka diyaarinta iyo beerista geedo ee aqalka dhirta lagu koriyo, waxaad heli kartaa goosashadii wanaagsan ee yaanyada karootada leh.
Intaa waxaa dheer, waxaad ka heli kartaa wixii khudaarta si ay u beerto yaanyada ee lagu koriyo, sida loo koro geedo: basbaaska, Beijing, aan tayo lahayn iyo broccoli, basbaas macaan, dhirta kale iyo waxa faa'iido badan si ay u beeri in lagu koriyo.